Radisson Hotel Group wuxuu labalaabinayaa faylalka ay ku hadlaan luuqada Faransiiska ee Afrika sanadka 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Radisson Hotel Group wuxuu labalaabinayaa faylalka ay ku hadlaan luuqada Faransiiska ee Afrika sanadka 2022
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Moroko News • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Radisson Hotel Group wuxuu safka hore kaga jiraa kobaca hudheellada ku hadla Afka Faransiiska ku hadla ee Faransiiska, isagoo ku dhawaaqaya inta lagu guda jiro Shirka FIHA (Forum de l'Investissement Hôtelier Africain), in Kooxda qorsheyneyso inay laba-jibbaarto hudheelkeeda hudheel ee suuqa Francophone-ka shanta sano ee soo socota. .
Radisson Hotel Group maanta, waxay leedahay 96 huteel iyo 18,500+ qol oo shaqaynaya iyo kuwa horumarin ku socda oo ka kala socda 31 dal oo Afrika ah, waxayna si adag ugu socotaa inay gaarto 130 huteel iyo 23,000+ qol sanadka 2022. Kooxda ayaa hadda leh 28 huteel oo shaqaynaya iyo kuwo horumarin ku socda. Afka Francophone-ka ee ku baahsan 13 dal. Tan waxaa ka mid ah lix heshiis oo huteel lagu saxiixay intii lagu jiray 2018 suuqyada sida Morocco, Ivory Coast, Tunisia, Niger iyo Republic of Guinea.
Si loo taageero loona kaxeeyo kobaca degdega ah ee ay ka sameysantahay qaarada Afrika, Radisson Hotel Group wuxuu ku xoojiyay kooxdeeda horumarineed soo bandhigida aqoon yahan sare oo dhanka horumarinta ah Ramsay Rankoussi, Madaxweyne kuxigeenka, Horumarinta, Bariga Dhexe, Turkiga & Afka Faransiiska ku hadla. Ramsay wuxuu la joogay Radisson Hotel Group in ka badan 5 sano, markii hore wuxuu kormeerayay kobaca shirkadda ee Bariga Dhexe & Turkiga oo hadda wuxuu hogaaminayaa howlaha horumarineed guud ahaan Afrikanka ku hadla Afka Faransiiska. Waxaa taageeray Erwan Garnier, Agaasimaha, hormarinta Faransiiska & Boortaqiiska ku hadla Afrika. Wadajir, waxay raadinayaan inay dardargeliyaan soo bandhigida dhammaan noocyada Radisson ee gobolka iyadoo diiradda la saarayo caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn ee dhaqaalaha. Qaab dhismeedka cusub ee ururka wuxuu daba socdaa magacaabistii dhowaan ee Frederic Feijs oo hogaamiya hawlgalada agaasime goboleed Afrika - Wadamada ku hadla Afka Faransiiska ee Radisson Hotel Group, oo door muhiim ah ka ciyaari doona xoojinta isku xidhka kooxda ee gobolka iyo kordhinta isdhaafsiga hawlgalada. faa'iidada milkiilayaasha.
Ramsay Rankoussi, Madaxweyne ku-xigeenka, Horumarinta, Bariga Dhexe, Turkiga & Afka Faransiiska ku hadla ee Afrika ayaa yidhi, “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ballaadhiyo diiradayda juqraafiyeed, oo aan ku daro Afrikaanka ku hadla Faransiiska. Waxaan leenahay qorshayaal hami leh oo ku saabsan suuqan muhiimka ah waana lama huraan inaan helno ilo sax ah oo meesha yaala si aan u taageerno koritaankeena. Tani waxay ka dhigan tahay in si wax ku ool ah loola xiriiro milkiilayaasha iyo maalgashadayaasha, iyo sidoo kale bixinta heerarka heerka koowaad ee qibradeynta sida aan u dhisno xiriirro muddo dheer ah lamaanayaasheena ganacsiga ee suuqan. Waxaan ku faraxsanahay in xubin kasta oo ka mid ah kooxdayada horumarinta ay ku habboon tahay shuruuda guusha. ”
“Waxaan si xowli ah u kobcineynaa gundhigeenna Francophone-ka Afrika iyadoo heshiisyada hudheellada ay istiraatiijiyad ahaan isku xiran yihiin si aan u gaarsiino qorshaheenna horumarineed ee shanta sano ka socda guud ahaan qaaradda, soo saarista noocyo cusub iyo kor u kac ku yimaada meelaha muhiimka ah ee Afrika. Waxaan qorsheyneynaa inaan sii wadno kobacaan la dedejiyey iyadoo loo sii balaadhinayo suuqyadeena diiradda saaraya qaaraddan soo koraysa. Qaab dhismeedkayaga cusub, waddamada sida Morocco, Senegal, Ivory Coast, Cameroon iyo Mauritius waxay leeyihiin awood istiraatiijiyad ballaaran oo muhiim ah dhammaan noocyadeenna si loogu fuliyo, ”ayuu raaciyay Rankoussi.
Radisson Hotel Group wuxuu qorsheynayaa inuu shan kale oo hoteello ah ka furo Afrika oo dhan sannadka 2019, afar ka mid ah waxay ku yaalliin suuqa Francophone, iyagoo ku riixaya faylalka Afrika in ka badan 50 hudheel oo shaqeynaya ka hor dhammaadka sannadka. Furitaanadan waxaa ka mid ah hudheelkii ugu horreeyay ee Radisson Blu ee ku yaal Casablanca, oo ah hudheelkii labaad ee kooxdu ka furato magaalada Marooko, oo qorshuhu yahay inuu furmo lixda bilood ee soo socota gudahood, iyo sidoo kale hudheelkoodii ugu horreeyay, iyo waddammada ugu horreeya ee hudheel caalami ah looga aqoonsado Niger, iyadoo la furayo Radisson Blu Hotel Niamey ee Q2 sanadkan.
“Istaraatiijiyadeena ayaa runtii xaqiijin doonta joogitaankeena suuqyada muhiimka ah kaliya ma ahan suuqyada Francophone, laakiin guud ahaan Afrika, iyadoo aan sii wadayno inaan diirada saarno gaarsiinta dhuumaheena balaarinaya,” ayuu ku soo gabagabeeyay Rankoussi.
Iyada oo qayb ka ah shaacinta magacii shirkadda ee horaantii sanadkii hore Radisson Hotel Group, ayaa la soo bandhigay qaab dhismeed cusub oo huteel caalami ah, kaas oo ay ku jiraan laba nooc oo cusub oo laga keenayo Afrika. Radisson Collection, oo loo qoondeeyay qaab nololeed qiimo leh iyo raaxo la awoodi karo iyo Radisson oo ah sumcadda hudheelka sare.
noocyada Cameroon magaalada Casablanca magaalooyinka xeebaha ururinta dhammeystiray shirka qaarada hadda heshiisyo Bixinta double drive hore East dhaqaale dhamaadka samee sii ballaarinaya ballaarinta khibrad fasalka koowaad hotel ugu horeeyay forum Faransiiska Guinea astaanta hoteelka heshiisyada hoteelka faylalka hudheelka waxaa ka mid ahaa sii kordhaya caalami ahaan soo bandhigay sal-dhigida maal- Ivory key markets l raadad nololeedka raaxada suuqyada mass Mauritius xubnaha Dhexe Bariga Dhexe bilood Morocco network calaamad cusub furitaanno hawlgalka shaqeeya hawlaha milkiilayaasha Wada-hawlgalayaasha dhuunta qorshe qorshooyinka ciyaaro faylalka Portugees ka iman kara premium joogitaanka xirfadeed Kuwa kibirka badanu Radisson Radisson Blu magac badalka dhawaan gobol regional director Jamhuuriyadda Khayraadka xaq u doorka qolal labaad doondoonaan Senegal waayeel saxiixay muhiim ah istaraatijiyad Qaab-dhismeedka guul dheer Gobolka Tunisia Turkey kor u kacsan upscale hotel Madaxweyne ku xigeenka